युएनडब्ल्यूटीओ डब्ल्यूटीटीसी असफल हुन चाहन्छ: मेक्सिको र डोमिनिकन रिपब्लिक जुराब पोलोिकाकाश्विलीले खेले
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » पर्यटन » युएनडब्ल्यूटीओ डब्ल्यूटीटीसी असफल हुन चाहन्छ: मेक्सिको र डोमिनिकन रिपब्लिक जुराब पोलोिकाकाश्विलीले खेले
संघ समाचार • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • व्यापार यात्रा • डोमिनिकन गणतन्त्र ब्रेकिंग न्यूज • सम्पादकीय • सरकारी समाचार • निवेश • मेक्सिको ब्रेकिंग न्यूज • समाचार • मान्छे • सुरक्षा • स्पेन ताजा खबर • पर्यटन • पर्यटन कुराकानी • यातायात • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा रहस्य • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • यूके ब्रेकिंग न्यूज • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज • विभिन्न समाचार
डब्ल्यूटीटीसी ग्लोबल शिखर सम्मेलन अप्रिल २-25-२27 मा क्यानकनमा प्रमुख ट्राभल उद्योग नेताहरूलाई साथ ल्याउने छ। यस कार्यक्रमको अब डोमिनिकन रिपब्लिकमा प्रतिस्पर्धा छ एक दुश्मनी विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) का महासचिवको दुश्मनी दृष्टिकोणको लागि। के यो यात्रा र पर्यटन उद्योगमा निजी र सार्वजनिक क्षेत्र बीच नराम्ररी आवश्यक सहयोगको अन्त हो?
यात्रा र पर्यटन कगार मा छ। लाखौं रोजगार खतरामा छ र UNWTO महासचिवले डब्ल्यूटीटीसी बिरुद्द युद्धको घोषणा गरे।
एक जनाले सिर्जना गरेको द्वन्द्वमा पर्यटनलाई फर्काउन तत्काल सहयोगको आवश्यकता छ, युएनडब्ल्यूटीओ महासचिवले मेक्सिको र डोमिनिकन रिपब्लिकलाई क्रस फायरमा परिणत गरायो।
निजी र सार्वजनिक क्षेत्रका शीर्ष नेताहरूसँग नराम्रो चाहिएको कुराकानीलाई नष्ट गर्न चाहेको आरोपमा यूएन एजेन्सीसँग पर्यटन कहाँ जान्छ?
"जुराब मुर्ख छैन किनकि विश्वले सोचेको थियो… उसको मतलब हो ... नराम्रो मान्छे।"
यी शब्दहरू संस्थापक जुर्जेन स्टेनमेट्जका हुन् विश्व पर्यटन नेटवर्क र को प्रकाशक eTurboNews। वर्ल्ड ट्राभल एण्ड टुरिज्म काउन्सिल (डब्ल्यूटीटीसी) का सदस्यहरू डब्ल्यूटीटीसीले गर्दै गरेको कामको बहिष्कार गर्नु भनेको सबैभन्दा ठूलो यात्रा र पर्यटन व्यवसायको लागि थप्पड जस्तो हो।
डब्ल्यूटीटीसीका सीईओ ग्लोरिया गुएवाराले भने: “हाम्रा सदस्यहरू क्रोधित छन्। युएनडब्ल्यूटीओ का महासचिव, जुराब पोलीकाशिविली, अब हाम्रो घटना बहिष्कार गर्न कोशिस गर्दैछ। म दु: खी र दु: खी छु। यो समय हो यस क्षेत्रलाई नेताहरूले सँगै मिलेर बहिष्कार नगर्न काम गर्न आवश्यक छ।
ग्लोबल गुवारा विश्व को यात्रा र पर्यटन उद्योग संगै र कार्यगत रहन कसैको जस्तो झगडा गर्दैछ। उनी त्यहाँ आफ्ना सदस्यहरूका लागि महामारी फैलिने मिनेटबाट नै थिइन।
"ग्लोरिया र म सधैं यो स combat्कटको सामना कसरी गर्न सक्छौं भन्ने सम्बन्धमा हामी सबैको एक समान मत हुँदैन, तर हामी एक अर्कालाई सम्मान गर्छौं," जुर्गेनले भने। "प्रत्येक सभ्य व्यक्तिले बुझ्न सक्छ कि अगाडि बढ्नु केवल सबैको साथ मिलेर काम गर्न को लागी हासिल गर्न सकिन्छ। युएनडब्ल्यूटीओका महासचिवले प्रमुख नेताहरुलाई युएनडब्ल्यूटीओ कार्यक्रममा अन्तिम दिनको बिन्दुमा भेला हुन बिन्ती गरेकै कारण डब्ल्यूटीटीसी सम्मेलनले डब्ल्यूटीटीसीलाई मात्र होइन तर यस उद्योगलाई बचाउन खोज्नेहरुलाई र संयुक्त राष्ट्र संघको प्रणालीलाई अपमान गर्दैछ। पूर्ण डोमिनिकन रिपब्लिकले यस्तो आयोजनको सह-होस्टिंग गर्‍यो जहाँ डब्ल्यूटीटीसीका धेरै सदस्य कम्पनीहरूले व्यवसाय गर्दछन धेरै छोटो अवस्थित। पर्यटन डोमिनिकन रिपब्लिकको जीडीपीको प्रमुख हिस्सा हो, र यो महत्वपूर्ण उद्योगको सुरुवात गर्न साझा लक्ष्यका लागि काम गरिरहेका जो कोहीलाई पनि सम्मान गर्नु DR सरकारको हितमा हुनुपर्दछ। "
ग्लोरिया गुएवरा मेक्सिकोका लन्डनस्थित वर्ल्ड ट्राभल एण्ड टुरिज्म काउन्सिल (डब्ल्यूटीटीसी) का सीईओ छ, २००++ सदस्य भएको संगठन विश्व यात्रा र पर्यटनको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी मिलेर बनेको छ। धेरैले भनेका छन् कि डब्ल्यूटीटीसीले पर्यटनमा निजी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। । विश्व पर्यटन संगठन, UNWTO संयुक्त राष्ट्र सम्बद्ध एजेन्सी हो र यसले सार्वजनिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दछ। जर्जिया गणराज्यका 200 44 बर्षे जुराब पोलीकाशिविली वर्तमान यूएनडब्ल्यूटीओ महासचिव हुन्।
२०१ 2017 को अन्त सम्म, UNWTO र WTTC ले यात्रा र पर्यटनको विश्वमा स्यामिज जुम्ल्याहा जस्ता संचालन गर्‍यो। यो जॉर्डनका डा। तलेब रिफाईको नेतृत्वमा थियो, पोल्लिकश्विलीले यस एजेन्सीको नेतृत्व लिनु भन्दा पहिले यूएनडब्ल्यूटीओका पूर्व महासचिवको रूपमा।
डा। टलेब रिफाई र डेभिड स्कोसिल
विश्व यात्रा र पर्यटन परिषद को यात्रा र पर्यटन को आर्थिक र सामाजिक योगदान मा एक वैश्विक अधिकार को रूप मा देखिन्छ। यूएनडब्ल्यूटीओ नेतृत्व परिवर्तन हुनु अघि डब्ल्यूटीटीसीका पूर्व सीईओ डेभिड स्कोसिल र डा। तलेभ रिफाईले यो महत्वपूर्ण विश्वव्यापी उद्योगको विकासको लागि हातेमालो गरिरहेका थिए।
यी सबै परिवर्तन १ जनवरी १, २०१ on मा भयो जब जुराबले ओगटे। यूएनडब्ल्यूटीओ एक बन्द संगठन हो जो एक व्यक्तिले धम्की प्रयोग गरेर चलाएको हो, र आफ्नो व्यक्तिगत ओहदा सुरक्षित गर्नका लागि पक्षपातवाद।
भोटका लागि बदलामा मनपर्ने कुरा प्राथमिकता थियो जब संसारले सबैभन्दा विनाशकारी संकटबाट गुज्र्यो - COVID-19। त्यहाँ एक प्रेस सम्मेलन भएको छैन जहाँ गैर-अनुरूप मिडियालाई जनवरी २०१ to को जनवरीदेखि उपस्थित हुन वा प्रश्नहरू सोध्न अनुमति दिइयो। UNWTO ले डब्ल्यूटीटीसीलाई एक प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेर्न थाल्छ, साझेदारको रूपमा होइन। पूर्व महासचिव डा। तलेब रिफाई युएनडब्ल्यूटीओ महासभा जस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा उपस्थित हुनलाई स्वागत गरेनन्। ग्लोरिया गुएवारालाई त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा बोल्न अनुमति थिएन र अन्तिम प row्क्तिमा विराजमान भएको थियो।
विश्वले यूएनडब्ल्यूटीओलाई हेरेन, तर सार्वजनिक क्षेत्रमा कसले फर्काउन सक्छ र? जुੁਰवले विश्व यात्रा बजार, आईएटीए, आईसीएओ घटनाहरू, र अधिक धेरैको बहिष्कार गरेका छन्। यसैबीच, यूएनडब्ल्यूटीओमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूले गोप्य रूपमा आफ्नो निराशा व्यक्त गरेका छन्, तर तिनीहरू सार्वजनिक रूपमा बयान दिन इच्छुक छैनन्, किनकि तिनीहरू महासचिवले मन नपरेको कुरा गरेमा उनीहरूको जागिरको चिन्तामा छन्।
जनवरीमा, जुराबले अर्को उम्मेद्वारलाई महासचिवको चुनावमा उचित हान्ने काम गर्न असम्भव बनाए, किनभने उनले यस प्रतिष्ठित पदवीलाई थप years बर्षसम्म राख्नेछन्। जनवरीमा उनले बहरेनको राज्यको अनादर गरे आफ्नो व्यक्तिगत तरिका प्राप्त गर्न।
UNWTO मा एक भित्री बताए eTurboNews, "उहाँ धेरै विभाजनकारी हुनुहुन्छ र जहिले घटनाहरू र पहलहरू उनका बहिष्कार गर्नुहुन्छ।"
ग्लोरिया गुएवारा निजी र सार्वजनिक क्षेत्रका लागि सब भन्दा महत्वपूर्ण घटना सँगै तान्न कोशिस गर्दै छ कि महामारी शुरू भयो। WTTC Summitnext महिना विश्व पर्यटन नेताहरु लाई आगामीमा भेट्नको लागि बनाईएको हो क्यानकुनमा ग्लोबल शिखर सम्मेलन। सबै विचित्रको बिरूद्ध र युरोप, ब्राजिल र अफ्रिकामा नयाँ रेकर्ड COVID-१ wave डाटाको साथै युरोप, ब्राजिल र अफ्रिकामा तेस्रो कोरोनाभाइरस वेभको बाबजुद डब्ल्यूटीटीसी ग्लोबल शिखर सम्मेलन २०२१ लाई एक सफल घटना बनाउन ट्राभल र टुरिज्मको भविष्यलाई उत्तममा राख्ने प्रतिबद्ध छ। सम्भावित ट्र्याक।
अत्यधिक प्रत्याशित WTTC २० औं ग्लोबल शिखर सम्मेलन, को साथ साझेदारीमा आयोजना गरिएको थियो Quintana Roo को सरकार र अप्रिल २-25-२27, २०२१ देखि क्यानकन, मेक्सिकोमा आयोजित हुनेछ। यस घटनालाई शारीरिक र वर्चुअलीमा भाग लिनेहरूका लागि सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन कुनै पनि कुरालाई बाँकी राखिएको छैन।
मेक्सिकोका एक सरकारी अधिकारीले एकलाई भने eTurboNews स्रोतले भन्यो कि देश UNWTO र डोमिनिकन रिपब्लिकको बारेमा क is्कुनमा भएको अत्यधिक प्रत्याशित घटनालाई तोडफोड गरेकोमा दुखी छ।
यहाँ कसरी पूरा फियास्को सुरु भयो।
गत महिना डोमिनिकन पर्यटनमा आत्मविश्वासको संकेतको रूपमा, यूएनडब्ल्यूटीओका महासचिव जुराब पोलीकाशिविली आफ्नो परिवारसँग डोमिनिकन रिपब्लिकमा बिदा मनाइरहेका थिए।
आफ्नो छुट्टीलाई सबै समावेशी र ज्यादै सम्भव भुक्तानी हुने कार्य मिशनमा परिणत गर्न उनले डीआरका अध्यक्ष लुइस अबिनाडरसँग विश्रामको अन्तिम दिन भ्रमण गर्ने अवसर लिए। उनले पर्यटन मन्त्री डेभिड कोलाडोलाई भने कि डोमिनिकन रिपब्लिक भ्रमणको लागि सुरक्षित ठाउँ हो र उनले भने कि डोभिकन रिपब्लिक विश्वको एउटा उदाहरण हो कि कोविड १ 19 को अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षणको व्यवस्थापनको समयमा जिम्मेवार प्रोटोकलको साथ पर्यटन कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य सुरक्षा संग पर्यटकहरु।
श्री पर्यटन डोमिनिकन रिपब्लिक डेभिड कोलाडो र UNWTO सेन जनरल जुराब पोलीकाशिविली
डोमिनिकन रिपब्लिकका लागि पर्यटन मन्त्रालयले सेक्रेटरी-जनरललाई सहमति जनाएको हुनसक्दछ। हिजो संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत अमेरिकाका पर्यटन मन्त्रीहरू र उद्योग नेताहरूलाई एउटा पत्र पठाएको छ।
चिठी पढिएको छ:
म संयुक्त राष्ट्र संघीय महासचिव, श्री। जुराब पोलीकाशिविली, र डोमिनिकन गणतन्त्रका पर्यटन मन्त्री, श्री। डेभिड कोलाडोलाई अमेरिकाको पर्यटन मन्त्रीहरूको बैठकमा उपस्थित हुन आमन्त्रित पठाउँदै खुशी छु। २ 26 देखि २ April अप्रिल २०२० सम्म डोमिनिकन रिपब्लिकको पुन्टा कानामा आयोजित।
अमेरिकाका लागि क्षेत्रीय विभाग
आज डोमिनिकन रिपब्लिकका एक सरकारी अधिकारीले उक्त निमन्त्रणाको पक्ष लिदै भने कि उनीहरूसँग जुराबको काम गर्ने पारिवारिक बिदामा सहमति भएकोमा उनीहरूको बैठकको बिभिन्न मिति थियो। यो जुराब पोलीकाशिविलीले गत हप्ता बैठकको मितिलाई परिवर्तन गर्न अनुरोध गरे जुन डब्ल्यूटीटीसी शिखर सम्मेलन हुने थियो।
अब यो UNWTO को साथ छ र WTTC को साथ छ को छनोट गर्न एक विकल्प दिन्छ। यो कटु छनौट गरीरहेको जान्ने पर्यटन यस संसारको संकटमा सबैभन्दा खराब प्रभाव पारिएको क्षेत्रहरू मध्ये एक हो। पर्यटन नेताहरू अब यो सबै सँगै हुन सक्दैन।
Lufthansa No Longer 'स्वागत छ महिला र ...
सीट बेल्ट वा डक्ट टेप बन्धन: नयाँ एयरलाइन सुरक्षा ...
पर्यटन मंत्रीले सेशेल्स आतिथ्य र ...